Shirkadaha Diyaaradaha Somaliya oo qarka u saaraan in Suuqa ka baxaan – Kismaayo24 News Agency
by admin 9th December 2019 9th December 2019 0171
Dhibaatada kale ee haysata shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya ayaa waxay tahay, in hay’adda caalamiga ah ee arrimaha duulimaadyada qaabilsan ICAO-IATA (ICH ) laga yaabo in ay galiso diyaaradaha Soomaaliya liis looga mamnuucayo duulimaadyada , kaddib markii ay sheegtay in ayna bixin lacagihii IATA ay khidmad ahaan ugu lahayd ee duulimaadyada hawada, iyadoo diyaaraduhuna ay caddeeeyeen in ay bixiyeen lacagahaas oo ay ka qaadday shirkadda maamusha garoonka diyaaradaha ee Mugadishu Favori.
Haatan dhibka ugu weyn ee taagan ayaa ah, in IATA iyo FAVORI ay leedahay mid walba Wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ayaa noo fasaxday in aan qaadno lacagaha duulimaadyada, waxaa IATA haatan ka dooneysaa oo ay ku soo dallacday shirkadaha Soomaalida lacag kor u dhaafeysa 20 milyan, oo dollar, uruurtayna muddo lix sano ah.
Arrimaha kale ee xusidda mudan ayaa waxaa ka mid ah, in Garoonka diyaaradaha Mugadishu, uu aad u dayacanyahay, shirkadda FAVORI oo maamushana aysan in muddo ah ka qaban shaqo micno leh. Tusaale ahaan, markii lafuray Terminalka cusub 2013ka, duulimaadyada diyaaradaha isticmaalayey waxay gaarayeen 3000 oo duulimaad sanadkii, haatan waxay duulimaadyada garoonku gaarayaan 30000 kun oo duulimaad sanadkii.
Waxaa dhacda in diyaaradaha degaya iyo kuwa duulaya ay in ka badan 40 daqiiqo sugaan, Waddada ay ku duulaan diyaaraduhuna madayactirna, waxaa garoonka Mugadishu, halis ugu jiraa in daad badda ka yimid qaado amaba shilal diyaaradeed ka dhacaan haddii aan si deg deg ah wax looga qaban.
Runtii, majirto cid laxisaabtanta shirkadda maareysa Garoonka ee FAVORI. Waxaa lagaarey xilligii lala xisaabtami lahaa FAVORI iyo Wasiirka Wasaarada oo ku tuntay xuquuqdii muwaadiniinta uu wasiirka u yahay iyo qeynuunka duulista hawada Somalia iyo caalamka.
Wax yaabaha lala yaabo ee garoonka Mugadishu ka dhaca ayaa waxaa kamida, in bartii ay dadka safarka ah gaadiidka ka raaci lahaayeen ama ay uga degi lahaayeen markay dhoofayaan laga dhigay Parkin baabuur oo gaar loo leeyahay, oo ay lacag ka gurtaan dad lasiiyey.
Shirkado ajnabi iyo kuwa Soomaali ah oo aan wax lataaban karo oo shaqo ah ka haynin garoonka ayaa iska maamusha. Sidaasi darted waxaan ku talinaynaa in deg deg wax looga qabto dhibaatooyinka iyo khataraha soo food saaray shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya iyo garoonka diyaaradaha Muqdishu.
Waa laga maarmaan ah, in la soo bandhigo heshiisyada qarsoon ee wasiirku lagalay shirkadaha ajnabiga ah ee loo fasayxay in ay soomaaliya uga shaqaystaan siday doonaan. Waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in lacaddeeyo xuquuqda shirkadaha duulimaadyada Soomaaliya oo ah canshuur bixiyeyaal ay ka shaqeystaan kumannaan Soomaali ah.